Mushandisi weWheelchair uye Mentor | Karman® Mawiricheya
hwiricheya Vashandisi Vanogona kuve Mentors ku
Kana iwe wakambove ne wemazano iwe uchaziva kukosha kwavanounza upenyu hwako. Ivo vanopa yakawanda kwazvo nhungamiro uye matipi ehupenyu kana chero chikonzero chavari mukati upenyu hwako. Kunyangwe zvisiri nyore kuwana chipangamazano zvakafanira kunetseka kwekuwana imwe. Vanhu vakaremara vanogona kuve ivo vanopa mazano vakanakisa nekuti vanehungwaru uye vakave vakasimba kuburikidza nemamwe mamiriro ezvinhu. Kana iwe uri wiricheya mushandisi saka iwe unofanirwa kufunga nezvekuva wemazano kune mumwe munhu anoda nhungamiro maari upenyu. Inogona kuve mumwe munhu ari shamwari kana inogona kuve iri mhuri. Pfungwa yakanaka ingave yekutungamira mumwe munhu kuti uri padyo to kuti iwe unowanzoona kuva nezuva rakaipa uye ivo vanogona kushandisa kuraira kwauinako kwavari.
Kutsvaga Mumwe Munhu Wekupangira
Kana zvasvika pakutsvaga mumwe munhu waunoda kuraira izano rakanaka kuraira mumwe munhu waunoziva kuti iwe unogona kupa kukosha ku. Muenzaniso wakanakisa ungave uri mwana uyo achangobva vanova mushandisi wewiricheya nekuti vachazviona zvichiodza moyo zvikuru. Unouya wotsanangura nekuvatungamirira zvikonzero nei zvisiri. Ita kuti vazive zvawakasangana nazvo uye zvawakaita kukunda zvipingaidzo izvozvo. Kana iwe usiri padyo nemunhu kana uine chero nhengo dzemhuri dzaunofunga kuti hadzidi chero gwara saka unogona kuedza nharaunda wiricheya mapoka kana zvimwe zvakafanana. Muenzaniso weizvi ungave mumwe munhu ari muboka, hongu, anoshandisa wiricheya asi ari kunetseka kujairana upenyu yekuve mu wiricheya. Uyai ne wiricheya mushandisi nhungamiro nezano zvakare. Vadzidzise zvishoma zvekuvaraidza kana zviitiko zvaunofarira kuzviita wiricheya hushamwari nekuti ivo vanogona kutanga kunakidzwa ivo pachavo.
Kuraira Mumwe Munhu
Kune nzira dzakawanda dzaungaraire mumwe munhu mukati wiricheya asi imwe yedzakanakisa nzira ingave iri yekuvaratidza nzira dzekuvabatsira kunzwisisa nei kuva mune wiricheya iri kwete zvakanyanya. Vabudise kunze kupaki kana kuenda navo kunzvimbo inoenderana newiricheya kuti vagoona kuti nzvimbo zhinji dzaungade kuenda wiricheya inoshamwaridzika uye ivo vanogona kutanga kunakidzwa nazvo. Varatidze zvinhu zvinonakidza zvekuita kana vachinge vafinhwa pamwe semapurogiramu epakomputa mabhuku anotonhorera ekuverenga kuti avabatsire kuuraya nguva kana kuve vanobudirira neapo nguva yekuwana yavanosangana nayo. Izvo zvese zvinodzika pasi kukosha kwemupi wezano.